छोरी करणी गर्ने उपसचिव – Himshikharnews.com
छोरी करणी गर्ने उपसचिव
छोरीमाथि करणी ! त्यो पनि नेपाल सरकारको उपसचिव तहको कर्मचारी ! ललितपुरबाट पक्राऊ परेका यादव थरका ती व्यक्ति चारित्रिक रुपमा मात्र नभई नैतिक रुपमा पनि पतन रहेको तथ्य फेला परेको छ ।
वन अधिकृतका रुपमा लामो समय काम गरेका उनी तराईका विभिन्न जिल्लामा खटिएका थिए । तराईमा खटिंदा वन फडाँनी गर्नेहरुलाई सहज गरिदिन्थे । त्यसवापत् पैसा जोहो गरी महल ठड्याएका थिए ।
२०६५ सालमा सहायक वन अधिकृत हुँदा वन फडानीमा संलग्न भएको अभियोग लाग्यो उनीमाथि । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले मुद्दा दायर गरेपछि निलम्बनमा परे । उनको मुद्या अझै विचाराधीन भएकाले निलम्बनमा छन् ।
२०७० सालमा भौतिक मन्त्रालयमा सरुवा भएका थिए । सरुवा भएर आएको केही वर्षपछि उनीमािथ अख्तियारले मुद्या दायर गरेको थियो ।
अख्तियारको मुद्दा खेपिरहेका यादव अब हाडनाता करणी र जर्बजस्ती करणी जस्ता बहुअभियोगमा मुद्दा खेप्दैछन् । उनको कुकृत्य प्रमाणित भएमा दशकभन्दा लामो समय जेल बस्नुपर्ने हुन्छ ।
कसरी खुल्यो कुकृत्य
४५ वर्षीय यादवले छोरीमािथ चार वर्षयता बलात्कार गर्दै आएका थिए । विद्यालय तहमा अध्ययन गर्दा देखि नै बलात्कार गर्ने गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ । प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा डरधम्की देखाई जर्बजस्ती करणी गर्ने गरेको खुल्यो ।
महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रमुख रवीन्द्र धानुकले घटनाको प्रारम्भीक अनुसन्धानले अभियुक्तले आफ्नै छोरीमाथि जर्बजस्ती गर्दै आएको बताए । उनले भने,‘अनुसन्धान जारी छ ।’
प्रहरीमा कसरी पुगिन्
बाबुबाट बलात्कृत भएयता छोरी निकै तनावमा हुन्थिन् । विद्यालय तहमा रहँदा नै निराश थिइन् । घरमा आमालाई समेत जानकारी हुँदा पनि बाहिर ल्याउन सकेका थिएनन् ।
उच्च माविमा अध्ययन गर्दा पीडितको शिक्षकसँग प्रेम सम्बन्ध बस्यो । आफ्नो पीडा सुनाउने मान्छे पाइन् । उनले आफूमाथि भइरहेको अत्याचारको कथा प्रेमीलाई सुनाइन् । प्रेमीकै कारण प्रहरीमा उजूरी दिने साहस गरिन् ।
प्रहरीका अनुसार अभियुक्त बाबुविरुद्ध छोरी र आमा दुवैले उजूरी दिएका थिए । १९ जेठमा उजूरी आउँदा एसएसपी धानुकलाई पत्याउन कठिन भयो । निकै गहिरो अनुसन्धान पछि अभियुक्तले कुकृत्य गर्ने गरेको निष्कर्षपछि पक्राऊ गरिएको थियो ।रिपोर्टर्सनेपाल डटकमबाट।